Maadaama uu ahaa nin aragti madaxbanaan leh, jecel in uu fikirkiisa xor u ahaado, aaminsan in siyaasadu mabda’ iyo aragti tahay, wuxuu xilka Wasiirnimo uu arkayey in uu xanibayo xoriyada fikirkiisa iyo aragtidiisa xal u helida arrimaha murugsan ee Soomaaliya. Taas ayaana keentay in uu maalmihii danbe oo idil iska gaabsado. Maanta ayaa Muqdisho lagu aasayaa Allaha u naxariisto Marxuum C/raxmaan Xoosh. Wuxuu hormuud u ahaa dhameystirka khariidaddii looga baxay xilligii kala guurka siyaasadeed ee dowladdii ku meel-gaarka ahayd 2011-12 iyo diyaarinta Dastuurka ku meel-gaarka ahaa, wuxuuna haatan gacanta ku hayey qaybo-tirka Dastuurka. Ma ahayn xaasid siyaasaseed . Wuxuu ahaa nin tawaaduc badan, qalbi fiican, bulshaawi ah, kaftan iyo sheeko badan, qunyar socod ah. Wuxuu ahaa siyaasi bidix ah oo aamisan cadaalada bulshada, xorriyada hadalka, nidaamka dimoqoraadiga, saraynta sharciga iyo ku dhaqanka Dastuurka. Danbigiisa Allaha dhaafo, naxariistii Jano Alllaha siiyo, sabar iyo iimaanna Allaha ka siiyo ehelkiisa iyo qoyskiisa iyo shacabka Soomaaliyeed intaba. – Allaaki
PreviousWararka aan ka heleyno Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi saakay uu dagaal ku dhexmaray labada arday oo wada dhiganeysay hal Iskuul.
NextDiyaarad rakaab oo laga leeyahay Itoobiya (Boeing 737) oo kusii jeedday magaalada Nayroobi ee dalka Kiiniya ayaa burburtay sida uu sheegay R/wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo tacsi u diray ehelka dadkii shilkaasi qabsaday. Wali lama sheegin tirada dadka ee la socday diyaaraddan burburtay oo ku jirtay duulimaadkeedii caadiga ahaa Addis ababa – Nayroobi. Inta badan dadka Soomaaliyeed ee isaga goosha dalalka Kiiniya iyo Itoobiya ayaa si wayn u raaca shirkadda diyaaraha ee Itoobiya ilaa hadda se ma cadda inay dad Soomaaliyeed lasocdeen diyaaraddan burburtay.